Inkxaso Call 0086-755-83880080
Iinzuzo usebenzisa SoonLink buKristu.
1.Get ngempendulo kunye neziphumo lula kwaye nangoko
2.Engage ne abaphulaphuli bakho, abafundi
3.Liven up intshumayelo yakho
5.Increase i ukuqapha yabaphulaphuli
Ziziphi iingenelo SoonLink buKristu?
1.2.4GHz frequency wireless, akukho WiFi efunekayo;
Unxibelelwano umgama 2.Long, ukuya kwiimitha ezili-100.
3.NFC for ekuqulunqeni kwayo.
Isimo 4.Classic yenzelwe kunye interface operation ngqo, kulula kakhulu ukuyisebenzisa.
5.Instant, iziphumo ezichanekileyo kwaye zibhalwe Excel ukusetyenziswa kamva.
6.No kolawulo umthamo yomsebenzisi.
Amava 7.Wonderful yokusebenzisa nanini na naphi na.
Ixabiso 8.Low ngokwenene.
Yintoni inkqubo impendulo abaphulaphuli engenazingcingo-time real (buKristu)?
A sisabele abaphulaphuli-time real inkqubo zokuqokelela data ukusuka ezininzi abaphenduli ukuba kwisabelo esisezantsi kunye kumqhubekekisi engundoqo kunye kwisiseko sesikhululo kunye isahlulo ekude kunye nobuninzi leeyunithi impendulo engenazingcingo abaphenduli ukuba kuyalelwa ukuba ufake idatha impendulo ukuba umbukiso abangaboniyo perceptible leyo zizakuboniswa live, kwi esweni kumabonwakude okanye tape. Ekwidispleyi ziquka imibuzo ekhethisayo. Iprosesa engundoqo oluhlala idata impendulo nge ngonomathotholo, amakhonkco onxibelelwano enombala okanye ive kunye neeyunithi kude, nganye inedilesi ekhethekileyo. Iprosesa engundoqo ubonisa idata impendulo aqokelelwe ngexesha lenene kwaye uzaleke idata impendulo kwaye zivela uboniso wobonakala abaphenduli.
Yintoni na SoonLink buKristu eziza kusetyenziswa?
I SoonLink lozwe ugqibelele ukuba uthotho ngeentlobo kuquka ukufundisa intsebenziswano, kwiintlanganiso iivoti kunye neenkomfa uphando. Kananjalo ingasetyenziswa ukuvumela bayayo ukunika ingxelo ngexesha loqeqesho lwabasebenzi, iindibano zocweyo kunye uhlolo lomngcipheko. Naliphi na ixesha ukuba kufuneka ukuba uvotele umba okanye sinokuqokelela iinkcukacha inani elikhulu labantu, SoonLink buKristu yeyona ndlela lokuyenza loo nto.
Yintoni i SoonLink buKristu zibandakanya?
I SoonLink lozwe iqulethe hardware ne-software. Le hardware iquka inani elithile keypads ngengcingo (ukuya kutsho ku-2000) kwaye i-wireless kunye USB. I-software ingafakwa kwi computer yakho enoba le nkqubo ukubaleka Microsoft Windows okanye Mac OS.
asebenze njani na keypads?
SoonLink ukuvota wireless ikhiphedi ngeenxa ubungakanani ikhadi lamatyala. Le keypads anikwa ukuba umntu ngamnye eklasini, inkomfa okanye intlanganiso. Kwamagqabi banxibelelane i-ngeengcingo isonka-ubungakanani edityaniswe nge computer nge intambo USB, bathatha iimpendulo kuyo nayiphi na imibuzo ngokuchanileyo epheleleyo. Oku kunokuba yindlela exabisekileyo kakhulu ukuqokelela ingxelo njengoko ivumela ukuba iimpendulo engaziwa ngokupheleleyo ukuba akukho nikhokelwa isihlwele. Le miphumo iyakujongwa kwakhona zadityaniswa kwaye liboniswe phantse ngephanyazo. Oku ngokukhawuleza kakhulu kunokuba nayiphi na indlela yesandla yokuvota okanye ingxelo indibano.
Lwedilesi: Room 1407, Kingem Intelligence Building, Liuxian Street, District Nanshan, Shenzhen, China